जुसेलिनो लुजसँग भेटघाट र भेटघाटहरू – JucelinoLuz
जुसेलिनो लुजसँग भेटघाट र भेटघाटहरू
२१ औं शताब्दीको ब्राजिलको सबैभन्दा ठूलो निको पार्ने मध्ये एक हो।
52 वर्षको लागि यसले यसको उपचार ऊर्जा ल्याएको छ र संसारभरि2मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूले यसको फाइदाहरूलाई स्वागत गरेका छन्।
उनको हेरचाहबाट लाभान्वित भएका ६०% मानिसहरूले खुसीसाथ निको भएको अवलोकन गर्न सकेका थिए। यो सफलता दर अभूतपूर्व छ!
भविष्यमा एक निको पार्ने र यात्रीको रूपमा जसले समय र स्थानलाई पार गर्दछ, उसले तपाईंको अस्तित्वलाई शारीरिक, भावनात्मक, ऊर्जावान, आध्यात्मिक सबै विमानहरूमा मिलाउनको लागि उहाँबाट गुजरने प्रकाश र ऊर्जालाई प्रसारण गर्दछ।
एक व्यक्तिगत सत्र को लागी Jucelino da Luz खोज्नुहोस्!
भाग लिनको लागि तलको लिङ्कहरू मध्ये एकमा क्लिक गर्नुहोस्